Liverpool oo iska xaadirisay wareega siddeeda ee tartanka Champions League kaddib markii ay garaacday RB Leipzig… +SAWIRRO – Gool FM
Liverpool oo iska xaadirisay wareega siddeeda ee tartanka Champions League kaddib markii ay garaacday RB Leipzig… +SAWIRRO
Dajiye March 10, 2021
(Hungary) 11 Maarso 2021. Liverpool oo iska xaadirisay wareega siddeeda ee tartanka Champions League kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0 kooxda RB Leipzig kulanka lugta labaad, Reds ayaa ku soo baxday celcelis ahaan labada kulan 4 gool maadaama kulankii kugta hore ay ku soo adkaatay 0-2.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Liverpool iyo RB Leipzig ku kala nasteen barbardac 0-0 ah.
Daqiiqadii 71-aad kooxda Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Mohamed Salah oo caawin ka helay saaxiibkiis Diogo Jota.
74 daqiiqo marka ay ciyaarta aheyd Sadio Mane oo caawin ka helay saaxiibkiis Divock Origi ayaa dheesha ka dhigay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Liverpool.
Balse ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 ay kaga adkaatay Liverpool kooxda RB Leipzig, kaddib ciyaar aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Puskas Arena magaalada Budapest ee wadanka Hungary.
Manchester City oo garoonkeeda Etihad guul weyn kaga gaartay kooxda Southampton… +SAWIRRO
Paris Saint-Germain oo ka ciribtirtay Barcelona tartanka Champions League una gudubtay wareega xiga ee siddeeda… +SAWIRRO